नेपाली मिडियाको असंवेदनशीलता - Online Majdoor
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:०९
काठमाडौँ, ७ फागुन । मङ्गलबारको अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिका ‘द काठमाडौँ पोस्ट’ को विचार पृष्ठमा चिनियाँ क्रान्तिका नेता माओ त्सेतुङको अनुहारमा मास्क लगाएको तस्वीर प्रकाशित गरेकोमा काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले आपत्ति जनाएको छ । ‘द कोरिया हेराल्ड’ मा प्रकाशित ते डाल्डरको लेख मङ्गलबारको काठमाडौँ पोस्टले साभार गरेको थियो । सो लेखमा प्रकाशित सन्दर्भ तस्वीरमा एक सय आरएमबी (चिनियाँमुद्रा) मा अङ्कित माओ त्सेतुङको तस्वीरमा मास्क लगाइएको कार्टुन छ । चीनमा अहिले महामारी बनेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई सङ्केत गर्दै ‘द काठमाडौँ पोस्ट’ ले सो कार्टुन छापेकोमा चिनियाँ कूटनीतिक नियोगले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको हो ।
मङ्गलबार प्रकाशित चिनियाँ राजदूतावासको वक्तव्यमा भनिएको छ, “फेब्रुअरी १८ को ‘द काठमाडौं पोस्ट’मा प्रकाशित एउटा लेखमा कुनियतवस छापिएको तस्वीरले नयाँ कोरोना भाइरस निमोनियाविरूद्ध लडिरहेको चीन सरकार र चिनियाँ जनताको प्रयासलाई खुला न्यूनाङ्कन र चीनको राजनीतिक बन्दोबस्तमाथि घातक हमला गरेको छ । हामी यस्तो कदमप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै दृढतापूर्वक विरोध गर्छौं । यसमा चीनप्रति अपमान र पूर्वाग्रह झल्किएको छ । यो कदमले चिनियाँ जनताको भावनामाथि चोट परेको छ । साथै चिनियाँ जनता र सबै क्षेत्रका नेपाली मित्रहरूबीच आक्रोश फैलिएको छ । यो कदम भत्र्सनायोग्य छ ।”
वक्तव्यमा भनिएको छ, “नयाँ कोरोना भाइरस निमोनिया अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य आपत्काल हो । चीन सरकारले यो महामारी रोक्न विस्तृत र बलियो कदम चालिरहेको छ । यस्तो प्रयासले सकारात्मक असर देखाइरहेको छ । चीन सरकारले चालेको धेरै कदम विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको सुझावभन्दा कता हो कता गुणस्तरीय छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावलीका आवश्यकताभन्दा माथिल्लो छ । हामीले निकै छोटो समयावधिमा हजारौँ शैय्याका धेरै अस्पताल स्थापना गरेका छौँ । यसले चीनको गति, प्रभावकारिता र क्षमता प्रदर्शन गरेको छ । साथै चीनको प्रणालीको शक्ति पनि प्रदर्शन गरेको छ ।”
चीनले महामारी नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गरेको र खुला एवम् पारदर्शी तरिकाले काम गरेको प्रस्ट पार्दै वक्तव्यमा सन् २००९ मा एच १ एन १ को महामारी २१४ देशमा फैलिएको र १८ हजार ४४९ जना मानिस निधन भएको र ६ महिनासम्म पनि आपतकाल घोषणा गर्न नसकेको उल्लेख छ । ‘कुनै पश्चिमा देशमा’ भनेर वक्तव्यले संरा अमेरिकालाई सङ्केत गरेर सो कुरा उल्लेख गरेको हो ।
‘द कोरिया हेराल्ड’ मा प्रकाशित ते डाल्डरको लेख मङ्गलबारको काठमाडौँ पोस्टले साभार गरेको थियो । सो लेखमा प्रकाशित सन्दर्भ तस्वीरमा एक सय आरएमबी (चिनियाँमुद्रा) मा अङ्कित माओ त्सेतुङको तस्वीरमा मास्क लगाइएको कार्टुन छ । चीनमा अहिले महामारी बनेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई सङ्केत गर्दै ‘द काठमाडौँ पोस्ट’ ले सो कार्टुन छापेकोमा चिनियाँ कूटनीतिक नियोगले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको हो ।
मङ्गलबार प्रकाशित चिनियाँ राजदूतावासको वक्तव्यमा भनिएको छ, “फेब्रुअरी १८ को ‘द काठमाडौं पोस्ट’मा प्रकाशित एउटा लेखमा कुनियतवस छापिएको तस्वीरले नयाँ कोरोना भाइरस निमोनियाविरूद्ध लडिरहेको चीन सरकार र चिनियाँ जनताको प्रयासलाई खुला न्यूनाङ्कन र चीनको राजनीतिक बन्दोबस्तमाथि घातक हमला गरेको छ ।
दूतावासको वक्तव्यमा ‘द काठमाडौं पोस्ट’ का प्रधानसम्पादक अनुप काफ्लेले चीनप्रति पूर्वाग्रहवस त्यस्तो तस्वीर प्रकाशित गरेको बताएको छ । “द काठमाडौँ पोस्टका प्रधानसम्पादक अनुप काफ्ले चीनसँग सम्बन्धित विषयमा सधैँ पूर्वाग्रहग्रस्त हुनु दुःखलाग्दो छ”, त्यसमा लेखिएको छ, “यो पटक भने उनी तथ्यको बेवास्ता गर्दै केही चीनविरोधी शक्तिका सुगा बनेका छन् । त्यसकारण उनको यस्तो काम असफल हुने पक्का छ ।”
उहानबाट फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा यतिबेला चीन सरकार, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया जनता एकजुट भएर अथक प्रतिरोध गरिरहेका छन् । चीनभित्र र बाहिर यो रोग फैलिन नदिन करोडौँ चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक कार्यकर्तालगायत चिनियाँ जनता दिलोज्यान दिएर लागिरहेका छन् । भाइरसले कुनै भौगोलिक सिमाना मान्दैन । चीनको उहानमा फैलिएको महामारी अरू कुनै पनि देशमा कुनै पनि बेला फैलिन सक्ने भएकोले महामारी नियन्त्रणको लागि संसारका सबै देश, सरकार र जनता एकजुट हुुुनुपर्ने बेला केही देशले भने यसलाई चीनविरोधी अभियानको सिलसिला मानिरहेका छन् । विशेषतः पश्चिमा देशहरू यसमा अग्रपङ्क्तिमा परिचालित छन् र पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले यसमा टेवा पु¥याइरहेका छन् । नेपालका केही ‘ब्रोडसिट’ वा ‘मूलधार’का अखबार र सञ्चारमाध्यम हिजोजस्तै यो विषयमा पनि पश्चिमा प्रचारबाजीको लहैलहैमा लागिरहेका छन् । पश्चिमका केही बिगहाउस मिडियाले भनेकै कुरालाई सत्य मानेर त्यसलाई प्रचार गर्ने र पश्चिमा विश्वले मानेका केही मानिसका कुरालाई नै ‘दिव्यवचन’ ठान्ने रोगबाट उनीहरू मुक्त हुनसकेका छैनन् । युरोपलाई नै सबै कुराको केन्द्र मान्ने यो पराधीन चिन्तनको भाइरसबाट नेपाली मिडिया पनि सङ्क्रमित छन् ।
छिमेकी चीन आज वियोगमा छ । चीनका जनता यो सङ्क्रमण चाँडै नियन्त्रणमा आउने कामना गर्दै महिनौँदेखि घरबाट बाहिर आएका छैनन् । उहानलगायत चीनभरि नै करोडौँ स्वास्थ्यकर्मी आफ्ना व्यक्तिगत जीवनलाई एक छेउ थन्काएर महामारीविरूद्ध अग्रमोर्चामा बसी लडिरहेका छन् । तीमध्ये केही चिकित्सकहरूले मृत्युवरण गरेका छन् । खासमा सम्पूर्ण चीन आज वियोगमा छ । यस्तो समयमा संसारभरका जनता चिनियाँ जनताको सङ्घर्षमा एकताबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम मानवता हो । जसरी सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को संरा अमेरिकामा हमला हुँदा सारा संसार शोकाकूल थियो, जसरी इबोला भाइरसले अफ्रिकी देशलाई सताइरहेको बेला सारा संसार चिन्तित थियो, जसरी अस्टे«लियामा महिनौँ लामो डढेलोले संसारलाई भावुक बनाएको थियो, जसरी नेपालमा २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले नेपाली धनजनको क्षति हुँदा सारा संसार नेपालको पक्षमा उभिएको थियो, यतिबेला चीनको वियोगमा ऊसँग संसार उभिनुपर्ने होइन र ? के चीनको वियोगलाई हाँसो, व्यङ्ग्य र खिल्ली उडाउने विषय बनाउनु न्यूनतम मानवताको अभाव होइन ? माओ त्सेतुङ चिनियाँ जनताका आस्थाका केन्द्र हुन् । माओको नेतृत्वमा भएको नयाँ जनवादी क्रान्ति नै आजको चीनको उदयको जग हो । माओविना आजको चीन कल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यसकारण चिनियाँ जनता माओ र माओ विचारधारालाई आज पनि उच्च सम्मान गर्छन् । चिनियाँ जनताको आस्थाको केन्द्र माओमाथि सिङ्गो चीन वियोगमा डुबेको र एकजुट भएर लडिरहेको बेलामा अपमानको ‘मास्क’ लगाइदिनु निःसन्देह त्यहाँका जनताको अपमान हो, भावनामाथि हेय दृष्टि हो । यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक अधिकारसँग जोड्नुको कुनै तुक छैन ।
बेलायतमा एउटा भनाइ छ, ‘तिम्रो स्वतन्त्रता त्यहाँबाट सुरू हुन्छ, जहाँबाट अर्को व्यक्तिको नाकको टुप्पाको अन्त्य हुन्छ ।’ अर्थात् स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको नाममा कसैले कसैको पनि नाक भाच्न पाउँदैन । हो, नेपालको संविधानले वाक् स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता दिएको छ । तर, वियोगमा परेको कसैलाई होच्याउन त्यो अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको होइन । नेपाली समाज र जनताले त्यो अधिकार सभ्य र मानवीय भावनाका साथ प्रयोग हुने आशाका साथ त्यो अधिकार संविधानमा लेखिएको हो । कुनै पश्चिमा सञ्चारमाध्यमको लहैलहैमा लागेर र शक्तिको आडमा छिमेकीमाथि होच्याउन त्यो अधिकार पक्कै सुनिश्चित गरिएको होइन ।
केही मानिसले ‘माओको मुखमा मास्क लगाएको यो पहिलो पटक होइन, पहिले पनि यस्ता घटना भइसकेको’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिए । माओलाई नेपाली ढाका टोपी लगाइदिएको एनिमेटेड तस्वीर छापिएको प्रसङ्ग पनि यही मेसोमा प्रकाशमा ल्याए । बुझ्नपर्ने कुरा, कुन समयमा के हुँदै छ भन्ने हो । मानिसले कतिखेर हाँस्यो भन्ने कुराको भिन्न भिन्न अर्थ लाग्छ । कोही मानिस कसैको खुसीमा हाँस्छ भने त्यो सद्भाव हो । कोही मानिस दुःखमा डुबेको बेला हाँस्छ भने त्यो हेपाइ हो । अहिले माओको मुखमा मास्क चीनप्रतिको अपमान हो । खुसीको बेला हाँसेको हाँसो र दुःखको बेला हाँसेको हाँसोका भिन्नभिन्न अर्थ लाग्छ । यतिबेला ‘द काठमाडौं पोस्ट’ ले माओको मुखमा मास्क लगाएको तस्वीर छाप्नु चीनको दुःखमा हाँस्नु हो, यो कदापि मानवीय हुनसक्दैन । सभ्य पत्रकारिताको लागि यो उपयुक्त कदम होइन ।